merolagani - तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन, कति कायम भयो समायोजित मूल्य ?
तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन, कति कायम भयो समायोजित मूल्य ?
Dec 16, 2018 Merolagani
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आइतबार तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। स्टकले विजय लघुवित्त, मिसान माइक्रोफाइनान्स र नेपाल ल्युब आयलले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट प्रस्ताव गरेको बोनसपछि मूल्य समायोजन गरेको हो ।
नेप्सेले विजय लघुवित्त (VLBS) को १० प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात प्रतिकित्ता ६३१ रुपैयाँ ८२ पैसामा शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। कम्पनीको १८० दिनमा कारोबार भएको शेयरमूल्यको आधारमा औसत आधारमूल्य ६९२ रुपैयाँ ९१ पैसा कायम भएको छ ।
त्यसैगरि किसान माइक्रोफाइनान्स (KMFL) को २९ प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात प्रतिकित्ता ९६३ रुपैयाँ ७१ पैसामा नेप्सेले शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको १८० दिनमा कारोबार भएको शेयरमूल्यको आधारमा औसत आधारमूल्य एक हजार २४१ रुपैयाँ २७ पैसा कायम भएको छ ।
लघुवित्तले हाल निष्काशन गरिरहेको चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रदलार्इ समेत यसअघि प्रस्ताव गरेकाे बाेनस रकम वितरण गर्दा २९ प्रतिशत बाेनस १९.३३ प्रतिशतमा घट्नेछ।
उता नेपाल ल्युब आयल (NLO)को पनि १० प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात प्रतिकित्ता १९३ रुपैयाँ ६४ पैसामा शेयरमूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको १८० दिनमा कारोबार भएको शेयरमूल्यको आधारमा औसत आधारमूल्य १७३ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
तीनवटै कम्पनीको समायोजित शेयरमूल्यमा शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले लाभांश पाउनेछैनन् ।
थप समाचारहरू यहाँबाट पढ्नुहाेस् :-
किसान माइक्रोफाइनान्सको २९ प्रतिशत बोनस सुरक्षित गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन
चिलिमे हाइड्रोपावर र गुराँस लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
प्रभु बैंकको शेयरमूल्य समायोजन
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
एनएमबि माईक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन
Oct 24, 2019 11:34 AM
ओरियन्टल होटलको शेयरमूल्य समायोजन